Paompy tsara rano, paompy rendrika, paompy lava - Tongke
Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd. dia iray amin'ireo orinasam-panjakan'i Shanghai Tongji Nanhui Science Hi-tech ampahany Co., Ltd. Mpanamboatra vokatra indostrialy sy vokatra famatsiana herinaratra, ao anatin'izany ny blower, paompy, motera elektrika sy rafitra fanaraha-maso hatramin'ny taona 2001. Hatramin'ny nananganana anay dia nanokana ny asanay izahay amin'ny famokarana vokatra izay manome fampiasa mahomby amin'ny fomba hitehirizana ireo loharano ilaina hitohizan'ny fiainana.
Nanomboka tamin'ny taona 2001
Traikefa 19 taona
Mihoatra ny 30 PRODCTIONS
FANAMPIANA EXPORT BE 20
Mpanamboatra vokatra feno indostrialy sy vokatra famatsiana herinaratra, ao anatin'izany ny, paompy, motera elektrika, valves ary rafitra fanaraha-maso hatramin'ny taona 2001. Hatramin'ny nananganana anay dia nanokana ny hetsika ataonay amin'ny fanamboarana vokatra izay manome fampiasa mahomby amin'ny fomba hitahiry ny loharano ilaina hivelomana.
Mametraka am-po ny fanavaozana ny haitao amin'ny fikatsahantsika fanatsarana kalitao, hanomezana vahaolana vahaolana fitaterana kilasy voalohany eran'izao tontolo izao.
API610 ANSI Process Chemical Standard Petrochemical Heavy Crude Fue ...
Fiara vonjy taitra finday motera maotera Diesel mitondra ny tenany maina Priming wate ...
Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd. dia orinasa manana teknolojia avo lenta izay mifantoka amin'ny R&D sy ny famokarana famokarana tsiranoka sy vokatra mpamonjy angovo tsiranoka, ary mandritra izany fotoana izany dia mpamatsy vahaolana fitsitsiana angovo ho an'ny orinasa. Affiliat ...
Tongke Flow dia nametraka setina paompy teboka 6 tsara ho an'ny EVOMEC amin'ny taona 2019. Izy io dia karazana kodiarana roa mihetsika karazana maotera tena izy. Modely paompy: SPDW150, fahafaha-manao: 360m3 / h, loha: 28 m, ary koa misy faritra misy fantsona sy teboka tsara ...